Unodoli ozelwe ngokutsha wosana, oDoli woNyana oPhila ngokufana noBomi, uSilicone oZalwe ngokutsha ngoSana-iGeshuo
Unyaka we-8, sihlala sisendleleni, kufana nokuba thina bantu senzelwe ukuba sizive silambile kwaye sinesidingo sokutya, iithoyi zihlala zivela nabantwana kwi-subconscious yethu. oonodoli abanobugcisa bemveli baseTshayina, kodwa nazo zonke iintlobo zezinto zokudlala zodidi lwesilicone ezithambileyo zemfundo, uqeqesho lwe-EQ, iithoyi ezimnandi.
Sinqwenela ukuba abantwana bafumane ihlombe kwaye beve abantu abadala ukubaxelela ukuba bayamangalisa, bakrelekrele kwaye benza kakuhle, ukuvumela abantwana ukuba bakhule kwindawo enabaxhasi, ukwamkelwa. Umlamli okrelekrele kubazali ukuba bafundise abantwana babo ngokuzonwabisa ngelixa bedlala, iithoyi zonodoli abazalwe ngokutsha zinobuhlobo ngaphezu kwezinto zokudlala.
I-ZIYIUI 22inch / 55cm Iidoll ezizalwe ngokutsha ziSof ...
Ubungakanani beDoli: 22 intshi / 55 cm Ubunzima: 3.3LB (1.5kg). Unodoli unokunxiba iimpahla zomntwana ezisandula ukuzalwa (0-3cm). I-pacifier yamagnetic inokulingana umlomo. Iidoli ezenziwe ngezandla kunye neempahla zodoli, olona suku lokuzalwa lubalaseleyo labantwana. Izinto eziphathekayo: Umzimba we-vinyl we-vinyl othambileyo, owenziwe nge-vinyl ye-silicone engenisiweyo, ukubamba kakuhle kodwa kunzima kancinci. Nje ube nobunzima obuthile kunye nokomelela xa ucinezela kuye. Ingangena emanzini ukwenza ishawa, awukwazi ukuhlamba nabantwana bakho. Unodoli unokuhlala kwaye alale ngokulula, kodwa akanakuma kwaye atyibilike ...
I-ZIYIUI 22 Inch 55 CM yoBomi boBomi oZelwe ngokutsha kwakhona uD ...
I-ZIYIUI i-18 48 i-CM ezelwe ngokutsha yoNodoli weSilicone uSoft ...
Unodoli ozalwe ngokutsha yi-Approx 18 intshi / 48 cm ukusuka entloko kuye ezinzwaneni, kunye nobunzima obuyi-3 Lbs malunga. Umgangatho ophezulu we-vinyl we-vinyl, uthambile kwaye unzima. Umzimba ngumzimba womqhaphu, uthambe kakhulu, ulunge kakhulu. Imilenze kaDoli inokushukunyiswa kwaye inokuhlala phantsi kwaye ilale phantsi kodwa ayikwazi ukuphakama, ayinakuthetha. Qaphela: lo nodoli awunakufakwa emanzini Ingalo nemilenze zingashukunyiswa ziye phezulu nasezantsi, kwaye umntwana angahlala alale phantsi, akakwazi ukulila, ukuhleka kwaye ...
I-ZIYIUI20 50 CM Umzimba wonke we-Silicone eyenziwe ngesandla ngeReb ...
Unodoli ozelwe ngokutsha yi-Approx 20 intshi / 50 cm ukusuka entloko kuye ezinzwaneni. Umgangatho ophezulu we-silicone vinyl. Umzimba wonke wenziwe ngezinto zokwenza izinto, umzimba unzima kancinci kunodoli womqhaphu. Imilenze kaDoli inokushukunyiswa kwaye inokuhlala phantsi kwaye ilale phantsi kodwa ayikwazi ukuphakama, ayinakuthetha. lo nodoli ungafakwa emanzini kwaye uhlambe nosana lwakho. Izinwele: Iinwele ezenziwe ngabantu ezivela eJapan, ezifakwe ngesandla, ukuthembeka okuphezulu, ezinokuhlambeka, zinokudityaniswa zihambelana neemfuno zokhuseleko ze-ASTM F963 kunye ne-EN71 ye ...
Ubungakanani: i-intshi ye-18 (i-45 cm); Ubunzima: malunga ne-1.2KG (2.6LB). Idoli yenziwe ngesandla, iya kuba yimpazamo kubukhulu kunye nobunzima. Intloko, iingalo kunye nemilenze: I-Vinyl ye-Silicone yokulinganisa, Umzimba: Ilaphu elizaliswe ngumqhaphu, lithambe kakhulu. Izinwele: Umgangatho ophezulu we-Mohair, ukumiliselwa okwenziwa ngesandla, unokuhlamba unxibe.Lento ngunodoli wosana, ke iinwele zincinci. Amehlo: Umgangatho ophezulu we-Acrylic, awunakucwebezela.Umlomo: Magnetic, Uya kuza ne-magnetic pacifier ukuze ulungele umlomo. Impahla yoDoli: eyenziwe ngezandla Ngokwexabiso ledoli. Unodoli w ...
I-ZIYIUI 22 55 CM i-Silicone ethambileyo yobomi eyenziwe ngezandla ...
Unodoli ozalwe ngokutsha yi-Approx 22 intshi / 55 cm ukusuka entloko kuye ezinzwaneni, kunye nobunzima obuyi-3 Lbs malunga. Umgangatho ophezulu we-vinyl we-vinyl, uthambile kwaye unzima. Umzimba ngumzimba womqhaphu, uthambe kakhulu, ulunge kakhulu. Imilenze kaDoli inokushukunyiswa kwaye inokuhlala phantsi kwaye ilale phantsi kodwa ayikwazi ukuphakama, ayinakuthetha. Qaphela: lo nodoli awunakufakwa emanzini Ingalo nemilenze zingashukunyiswa ziye phezulu nasezantsi, kwaye umntwana angahlala alale phantsi, akakwazi ukulila, ukuhleka kwaye ...
Uhlobo olutsha lweeSilicone zokuzalwa kwakhona kweentsana
Nokuba uyathandana neentsana ezizalwe ngokutsha okanye ukhetha ...
Yintoni oonodoli abazelwe ngokutsha?
Iidoli ezizalwe ngokutsha Iidloli zoSana zifana nobomi, h ...
Apho uthenga i-lifel yokwenyani yokwenyani ...
Ukuba umtsha ekuqokeleleni oonodoli abazelwe ngokutsha, okanye ...
Oonodoli abazalwe ngokutsha